Sad News!This is Yohaannis Fiixee, age 44, who has been killed by Ethiopian defense forces in Western Oromia. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSad News!This is Yohaannis Fiixee, age 44, who has been killed by Ethiopian defense forces in Western Oromia.
This is Yohaannis Fiixee, age 44, who has been killed by Ethiopian defense forces in Western Oromia.
He was a father of four, killed by ODP led government forces in Qelleem Wallaggaa, Yamaalogii walal, Ganda hawaasaa saasii in town of Masaraa. He was killed by six bullets on 20-9-2019 on the pretext of supporting Oromia Liberation Army, the military wing of Oromo liberation Front.
Residents say he was an innocent resident who work hardly to support his family. The military killed him in front of his house without any investigation.
Kun hedduu suukkanneessaa dha. Ummanni Oromoo garuu waan lammii keenya Oromiyaa kibbaa mudachaa jiru beekuu qaba.
Kun Dalaga OPDOn Uummaata keenna qulqulluu kan Gujii Lixaati fi Baha irraatti dalaga turte!
Akeekkachiisa: Suuralee kunneen yoo dandeessan qofaa banaatii ilaalaa!
Godina Qelleem Wallaggaa aanaa Yamaalogii walal Ganda hawaasaa saasii magaalaa masaraa Kan ta’e obbo Yohaannis Fiixee abbaa ijoollee 4 Kan ta’an guyyaa kaleessa gaafa 20-9-2019 deggeraa WBO ti jechuun Mana jireenya isaa keessaa gadi baasanii rasaasa 6’n rukutuun ajjeesan RIB’n Kan komaandi postii ofiin jettu Mana barumsaa Gomor sadarkaa 1ffaa keessa maadheeffattee hawaasa nagaa goolaa jirti.
Hukmni waraanaa nama kana manaa gad baasee rasaasa 6n ajjeessan; sana booda akka reeffa isaa hin awwaalamne dhorkan.
Yohannis gaheessa waggaa 44 ture.
OPDOn ummata keenya ficcisiisaa jirti. Falachuun barbaachisaa dha!!